ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တချို့ကို ဘာဆန်ချာကျွန်းကို ဒီနေ့ စတင်ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကို အဲဒီကျွန်းကိုပို့မယ်အစီအစဉ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုနေပေမယ့်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက ဒီနေ့မှာ စတင်ပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Cox’s Bazar ဒေသမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထဲက ဦးရေ ၁,၆၀၀ ကျော်ကို တင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်သင်္ဘော ၇ စင်းဟာ ဘာဆန်ချာကျွန်းကို ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ထွက်ခွာပြီး နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ရောက်သွားပါပြီ။
ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အစားအစာတွေနဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို တင်ထားတဲ့ နောက်ထပ် သင်္ဘောနှစ်စင်းလည်းပါပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်း လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ဘာဆန်ချာကျွန်းကို ပို့ဆောင်ဖို့အတွက် စီစဉ်နေတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရတာဝန်ရှိသူတဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
Bhasan Char ကျွန်းသို့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ ပြောင်းရွှေ့သည့် မြင်ကွင်းတချို့ ~~~~ Bhasan Char ကြှနျးသို့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျမြား ပွောငျးရှသေ့ညျ့ မွငျကှငျးတခြို့
ဒီအဆင့်မှာ ဒုက္ခသည် ၂,၅၀၀ လောက် ဘာဆန်ချာကျွန်းကို အောင်မြင်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပြီး လာမယ့် သီတင်းပတ်တွေ လပိုင်းတွေအတွင်း နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဘာဆန်ချာကျွန်းကို ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး A.K. Abdul Momen ကတော့ ဘယ်ဒုက္ခသည်တဦးတယောက်ကိုမှ အဲဒီကျွန်းကို အတင်းအကြပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
“သူတို့ဆန္ဒအလျောက်သွားဖို့ သဘောတူတဲ့သူတွေကိုပဲ အဲဒီကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပြီး Cox’s Bazar က လူတွေပြည့်ကြပ်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆိုရင် သူတို့ဟာ အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဘာဆန်ချာကျွန်းမှာတော့ သူတို့အနေနဲ့ သေချာပေါက် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်။" လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Abdul Momen က ပြောပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အတော်များများကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရအနေနဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ ဒီကျွန်းအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိမရှိဆိုတာကို စုံစမ်းဖို့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့တခုကို စေလွှတ်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ ၁,၆၀၀ ကြျော Bhasan Char ကြှနျး ပွောငျးရှေ့
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရက နိုငျငံတှငျးမှာရှိတဲ့ ရိုဟငျဂြာ ဒုက်ခသညျတခြို့ကို ဘာဆနျခြာကြှနျးကို ဒီနေ့ စတငျပို့ဆောငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒုက်ခသညျတှကေို အဲဒီကြှနျးကိုပို့မယျအစီအစဉျကို ရပျတနျ့ဖို့ လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့တှကေ တောငျးဆိုနပေမေယျ့လညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရက ဒီနမှေ့ာ စတငျပို့ဆောငျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ Cox’s Bazar ဒသေမှာရှိတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှထေဲက ဦးရေ ၁,၆၀၀ ကြျောကို တငျဆောငျထားတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရတေပျသင်ျဘော ၇ စငျးဟာ ဘာဆနျခြာကြှနျးကို ဒီနေ့ မနကျပိုငျးက ထှကျခှာပွီး နလေ့ယျပိုငျးမှာ ရောကျသှားပါပွီ။
ဒုက်ခသညျတှအေတှကျ အစားအစာတှနေဲ့ တခွားလိုအပျတဲ့အရာတှကေို တငျထားတဲ့ နောကျထပျ သင်ျဘောနှဈစငျးလညျးပါပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ နောကျထပျ ဒုက်ခသညျထောငျပေါငျးမြားစှာကိုလညျး လာမယျ့ရကျပိုငျးတှအေတှငျး ဘာဆနျခြာကြှနျးကို ပို့ဆောငျဖို့အတှကျ စီစဉျနတေယျလို့ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရတာဝနျရှိသူတဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
ဒီအဆငျ့မှာ ဒုက်ခသညျ ၂,၅၀၀ လောကျ ဘာဆနျခြာကြှနျးကို အောငျမွငျစှာ ပို့ဆောငျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ထားပွီး လာမယျ့ သီတငျးပတျတှေ လပိုငျးတှအေတှငျး နောကျထပျ ဒုက်ခသညျထောငျပေါငျးမြားစှာကို ဘာဆနျခြာကြှနျးကို ထပျမံရှပွေ့ောငျးပေးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့တယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး A.K. Abdul Momen ကတော့ ဘယျဒုက်ခသညျတဦးတယောကျကိုမှ အဲဒီကြှနျးကို အတငျးအကွပျရှပွေ့ောငျးခိုငျးတာ မဟုတျဘူးလို့ ပွောပါတယျ။
“သူတို့ဆန်ဒအလြောကျသှားဖို့ သဘောတူတဲ့သူတှကေိုပဲ အဲဒီကိုပို့ဆောငျပေးတာဖွဈပွီး Cox’s Bazar က လူတှပွေညျ့ကွပျနတေဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှောဆိုရငျ သူတို့ဟာ အခကျအခဲမြိုးစုံနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဘာဆနျခြာကြှနျးမှာတော့ သူတို့အနနေဲ့ သခြောပေါကျ ပိုပွီးတော့ အဆငျပွမှောဖွဈတယျ။" လို့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Abdul Momen က ပွောပါတယျ။
လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့ အတျောမြားမြားကတော့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရအနနေဲ့ ဒီအစီအစဉျကို ရပျတနျ့ဖို့နဲ့ ဒီကြှနျးအနနေဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို လကျခံနိုငျစှမျးရှိမရှိဆိုတာကို စုံစမျးဖို့ သီးခွားလှတျလပျတဲ့ ကြှမျးကငျြတဲ့အဖှဲ့တခုကို စလှေတျဖို့ တောငျးဆိုထားပါတယျ။